Izindlela Zokugxila Egxile Ukuhlanzwa Okukhulu - I-Hielscher Ultrasound Technology
Hielscher Ultrasonics ngesandla-ebanjwe noma stand-aphakanyiswe probs ultrasonic ngqo amaza kakhulu ultrasonic amagagasi kuya ukuvuleka wire ufa, wire iziqondiso, extruder uyafa, extruder amapuleti noma spinnerets. Lokhu kuhlanza iziteshi ezinhle kanye nezindawo ezihamba ngamasekhondi ukusuka ku:
amasobho kanye nama-stearates
ama-filaments, izinkokhelo nezinye izinhlanga
izinsalela ze-polymer nomlotha
I-Needle, Drill ne-Wire Cleaning
Ukuhlanzwa okuvamile kwamathuluzi e-extrusion kanye ne-wire dies usebenzisa izinaliti, ama-drill noma izintambo ukususa izinsalela ezibonakalayo nokungcola kusuka eziteshini ezincane. Imikhombandlela eminingi kanye nokufa ihambisana ne-poly-crystalline diamond (i-PCD), idayimane yemvelo noma i-tungsten carbide (TC), futhi inqubo yendlela yokulimala ilimaza indawo yangaphakathi futhi ingathinta usayizi, ukuma nokubukeka kwesiteshi seziteshi ezincane.
Isofthiwe esicacile se-ultrasonic ayithinti ubuso obubonakalayo, kodwa iqondisa ukuduma okukhulu kwe-ultrasonic kanye nokushaqeka kwamagagasi-ukuvulwa kwesiteshi esincane. Lokhu kuyashesha kakhulu futhi kuphephile kunokuqhathanisa inaliti enesisindo futhi echitha isikhathi.
I-Ultrasonic Cleaning Baths noma Amathangi
Ngesikhathi ama-baths e-ultrasonic kanye namathangi okuhlanza kuhle ukuba izingxenye ezijwayelekile zihlanzwe, amandla abo aphansi awancane ekuhlanzeni iziteshi ezincane nezindawo ezifihliwe. Lokhu kubizwa ngokuthi i-shadowing. Futhi, ithangi elikhulu lisuke liphuma nge-ultrasound kusuka phansi kuphela. Ngakho-ke inqubo yokuhlanza ingathatha amaminithi amaningana amahora ukuze i-wireless ifa, i-extruder ifa noma iholele futhi isaholela ekuhlanzeni okuphelele. Amancane ububanzi besiteshi, okuhle kakhulu kuyinkomba yokuhlanza i-ultrasonic egxile kakhulu.
I-Ultrasonic Probes ekhonjiwe kakhulu
Iziteshi ezincane nama-pores, sincoma ukusebenzisa i- I-UP100H nge-tip ecacile ye-MS2. Lokhu kuyisetshenziswa esisebenzisekayo esisebenza ngezandla noma esimi phezulu. Ukuze uthole ama-multi-pore spinnerets, ama-plrusion afe plate noma ama-wire amaningi afa, i I-UIP1000hdT eneprojekthi ekhethekile ye-100mm ububanzi.
Iningi lamakhasimende ethu alidingi izinhlelo zokuhlanza ezizenzakalelayo noma ezenzekelayo, ngoba ukuhlanza kuthatha imizuzwana eminingana kuphela.
Ngokuba ama-polymers, afana ne-nylon, i-olefin noma i-polyester, ukwelashwa kokushisa okulungiselelwa kwenza i-polymer ibe neyodwa. Lokhu kubizwa ngokuthi ukushisa kwe-ovini kunciphisa i-polymeri enzima ukuze idume. Ukuhlanzwa, amanzi (afika ku-25wt% phosphoric acid) noma amafutha angasetshenziswa njengendlela elula yokuxhuma emkhatsini weprobe ye-ultrasonic kanye ne-spinneret.
Funda kabanzi mayelana nama-ultrasonics for:
I-Wire ne-Strip Cleaning